Malunga nathi -Xinjia Nylon Co, Ltd.
I-Huai'an Xinjia Nylon Co, Ltd. yasekwa ngo-1999. Phambi ko-2009, yayiyi-Huai'an Xinjia Plastic Factory. Yabizwa ngegama layo ngoku ngoFebruwari 2009. Inkampani igxile kwimveliso, kuphuhliso, kunye nasekuthengiseni ngentambo yenylon, ucingo locingo lwebrashi. Iimveliso ze-nylon 610 chip, inenkqubo epheleleyo kunye nesayensi yolawulo lomgangatho.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-20 yophuhliso kunye nokuyila, iXinjia Nylon Co, Ltd. iye yaba sisityalo semveliso yenylon esidumileyo kwiPhondo laseJiangsu. Ingqibelelo yethu, ukomelela kunye nomgangatho wemveliso ziye zaqatshelwa lushishino. Abahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi bamkelekile ukuba batyelele, bakhokele kwaye bathethathethane ngamashishini.
I-Huaian Xinjia Nylon Co, Ltd. ithatha indawo yeehektare ezingama-38 kwaye yenze isiseko semveliso yenylon ngemveliso yonyaka yeetoni ezingama-4,100, enendawo yokwakha engama-23,600 eemitha zesikwere kunye notyalo-mali olupheleleyo lwe-yuan yezigidi ezili-150. Inkampani okwangoku inabasebenzi abali-150, abali-15 kubo bazibandakanye kuphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso, kwaye banophando olunamandla ngemveliso kunye namandla ophuhliso. Kukho imigca emithandathu yokuvelisa.
Sisebenza ngentambo yenylon ye-610; PBT; ucingo olubukhali; ipeyinti yocingo lwe-acrylic; ucingo olubukhali; Suture yezonyango Inokusetyenziselwa ukuvelisa oomatshini, imoto, ukuhamba ngenqwelomoya, ukwakha iinqanawa, ishishini lamachiza. Ngokukodwa, inokwenza iibheringi, iipads, izixhobo zokutywina, izixhobo zoomatshini bempahla, izikhokelo zezixhobo, izikhokelo, iibristles, iibrashi, iibrashi zamazinyo, iiwigi, njl njl. Kwaye zingenza ngokwezifiso iimveliso ngokweemfuno zabathengi, ubungakanani bombala
Indawo yethu yokusebenzela igubungela ummandla we-10,100 yeemitha zesikwere kwaye inabasebenzi abali-120, kubandakanya abantu abali-15 ababandakanyeka kuphando lobuchwephesha kunye nophuhliso, kwaye banamandla okuphucula imveliso. Inkampani ikugqala kubaluleke kakhulu kuphuhliso lweemveliso ezintsha kunye neetekhnoloji, kwaye ibambelela kubaluleke kakhulu kutyalo-mali kuphando lwezenzululwazi. Ifake isicelo sokuyilwa kunye nokusetyenziswa kwepatent yomzekelo. Okwangoku kukho imigca emi-6 yokuvelisa, kwaye kukho ii-extruders ezingamawele, izixhobo zoomatshini bokubumba inaliti, izixhobo zokuphefumla kunye nezixhobo zovavanyo ezinxulumene noko ezisetyenziswa kuphando nakuphuhliso, ezinokuthi zihlangabezane neemfuno zophando lweemveliso kunye nokuqhuba umqhubi, umqhubi wenqwelomoya kunye nemveliso yoshishino.
Kule minyaka idlulileyo, inkampani ilungelelanise isicwangciso sayo sophuhliso. Okokuqala, igxile kwimithombo yoluntu kunye nemali yokunyusa isantya sophando kunye nophuhliso lweemveliso eziphambili; okwesibini, icwangcise ngononophelo ukuveliswa kwemveliso ezizenzele ukuqinisekisa umgangatho weemveliso; Okwesithathu, inike ingqalelo kuphuhliso lwentengiso kwaye ijolise kwimarike. Uphuhliso olukhawulezayo lwamashishini. Inkampani ineqela eligqibeleleyo lokuthengisa elinabasebenzisi abangaphezu kwama-400 kwilizwe liphela. Isixa sesilika esisetyenzisiweyo siyonyuswa malunga ne-10% minyaka le, kwaye ii-sutures zonyango ziyonyuswa nge-5% minyaka le. Ukubeka isiseko esiqinileyo sokuthengisa imveliso.
Umgangatho ophezulu:Inkampani izinikele kwimveliso yeemveliso ezizenzele zona ukuqinisekisa umgangatho wemveliso
Ixesha lokuzisa:Abasebenzi abanamava nabadala, baqinisekisiwe ukuhanjiswa ngexesha
Gcwalisa iintlobo:Ikakhulu yahlulwe ucingo ibhrashi, ucingo ibrashi yocingo, ucingo wenayiloni, iinkcukacha ezahlukeneyo kunye nemibala ungenziwa ngemfuneko. Ubungakanani becala eliqhelekileyo le-wire ngu-0.07M-1.8M, kwaye imibala ibomvu, tyheli, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza, mfusa, ngwevu, mnyama, kwaye ibonakala ngaphaya.